News Collection: अन्ना क्यासिनो कब्जा गर्दै माओवादी
अन्ना क्यासिनो कब्जा गर्दै माओवादी
काठमाडौँ । हत्या र अपहरणको घटनाका अभियुक्त बनेर केही दिन प्रहरी हिरासतको पाहुना बनेका माओवादीका एक छोटे मजदुर नेता क्यासिनोका मेनेजर बनेका छन्। शालिकराम जमकट्टेलको आडमा होटल क्षेत्रमा मजदुर संगठनको नाममा आतंक मच्चाइरहेका कल्पदीप रार्ई नामक व्यक्ति प्रचण्ड पक्षधर मजदुर नेताहरूको दबाबमा अन्ना क्यासिनोका निमित्त महाप्रबन्ध बनाइएका हुन्। गृहमन्त्री र प्रहरीसँग लाईन मिलाएर क्यासिनोमा नेपालीलार्ई छिराउने ठेक्का लिने सर्तमा उनलार्ई राजस्वमारा अर्का ठग राकेश बाधको निमित्त महाप्रबन्धक बनाएका हुन्। महाप्रबन्ध बनेलगत्तै लाखौं रकम हिनामिना गरेपछि बाधवासँग पनि उनको लफडा सुरु भइसकेको छ।
केही समयअघि रार्ई बाधवालार्ई भेट्न गोवा गएका थिए। त्यसबेला पनि बाधवाले रार्ईसँग १९ करोडको हिसाब मागेका थिए। तर, 'काले काले मिलेर खाउ भाले' भन्ने उखानजस्तै कालो धनका विषयलाई लिएर भएको उनीहरूको विवाद केही दिनभित्रै मिल्यो। तर १९ करोडको हिसाब भने राईले अहिलेसम्म बाधवालाई दिएका छैनन्। स्रोतका अनुसार पार्टीको आडमा रार्ईले क्यासिनो नै कब्जामा लिने योजना बनाएका छन्।
जसका लागि माओवादीभित्र आपराधिक मनस्थिति भएका मजदुरहरूको समेत स्वामित्व बाँडेर क्यासिनो कब्जामा लिने सहमति भएको छ। यसअघि माओवादीले क्यासिनो बाधवाकै देखाएर सबै आम्दानीजति आफैले लिएका थिए। माओवादीकै मिलेमतोमा बाधवाले करोडौं रोयल्टी बुझाएका छैनन्। सरकारले कडाइ गरेपछि बाधवा 'फरार' भएको बहाना बनाएर माओवादी मजदुर संगठनले क्यासिनोलार्ई कब्जामा लिई दुहुनो गाई बनाएर लुट मच्चाइरहेका छन्। उक्त योजनामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समेत साथ रहेको स्रोत बताउँछ।
प्रचण्डकै विश्वासपात्र भएकाले रार्ई बाबुराम भट्टरार्ई पक्षका मजदुरलार्ई कुटपिट गरेको आरोपमा बैशाखको अन्त्यमा डाँका र ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत पक्राउ परेका थिए। आफ्नै सहकर्मी तथा क्यासिनो अन्नाका इकाई कोषाध्यक्ष ज्ञानुमान डंगोललार्ई मरणासन्न होउन्जेल कुटेको अभियोगमा त्यतिखेर पक्राउ गर्दा प्रचण्ड पक्षकै नेताको दबाबमा छुटाइएको थियो। सल्यान जिल्ला जन्म घर भएका रार्ई हाल ललितपुरको लामाटारमा दुई रोपनी क्षेत्रफलको जमिनमा बनेको घरमा बस्छन्। जबकि भत्तासहित उनको मासिक तलब १० हजार मात्र छ। ०६० सम्म उनी एमालेको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध थिए। ०६० को वार्ताकालमा रार्ई माओवादीको सम्पर्कमा पुगे। त्यसबेला माओवादीले मजदुर र विद्यार्थी क्षेत्रमा आफ्नो संगठन विस्तारलार्ई तीव्रता दिएका थिए। माओवादी भइसकेर पनि चार महिनाअघि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री रहेका बेला एक भेटमा रार्ईले म पनि एमाले नै हुँ भन्दै पुरानो कार्ड देखाएर आफ्नो स्वार्थी चरित्र भजाएका थिए। ट्याक्सी ड्राइभर र ठेकेदारका कुल्लीको हाजिर राख्ने काम गर्दै उनी होटल क्षेत्रमा छिरेका थिए। करिब ३२ वर्षका रार्ईका दुई छोरी छन्। तीन वर्षअघिसम्म उनी 'घर ज्वाइँ' बसेका थिए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी नौ महिनाबाहेक निरन्तर होटल इकाईका अध्यक्ष रहँदै आएका थिए।
कति छन् अभियोग?
राईविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं, धादिङ र विभिन्न प्रहरी वृत्तहरूमा गरी करिब एक दर्जन किटानी जोहरी परेका छन्। तर जम्कट्टेल पक्षको दबाबमा प्रहरीले डङ्गोल कुटपिटको मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। वैशाख ३१ गते सभासद्समेत रहेका जम्कट्टेल र अर्का मजदुर नेता बाबुराम गौतम उनलार्ई भेट्न हनुमानढोका पुगेका थिए। प्रहरीले भेट गर्न नदिएपछि जेठ १ गते केही मजदुरहरूलार्ई जबरजस्ती हुनमानढोका लगेर रार्ईको पक्षमा नाराबाजी गर्न लगाएका थिए जम्कट्टेलहरूले। ०६६ असोजमा काठमाडौ स्युचारटारका दुई युवा निर्मल पन्त र पुष्कर डङ्गोललार्ई माओवादीले धादिङमा अपहरण गरी हत्या गरेका थियो। त्यो हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै रार्ईलगायत १७ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ। सभासद्समेत रहेका जम्कट्टेलको निर्देशनमा युवाद्वयको हत्या भएको थियो। जम्कट्टेलमाथि पनि यो हत्यामा किटानी जाहेरी परेको छ।
त्यसै गरी रार्ईकै नेतृत्वमा दरबारमार्गस्थित उडल्यान्ड होटलका मालिक हरिलाल श्रेष्ठलार्ई अपहरण गरी जबरजस्ती डेढ करोडको कागज गर्न लगाएको मुद्दा पनि प्रहरीमा दर्ता छ। प्रचण्ड सरकारका पालामा क्यासिनोमा छापा मार्न गएको प्रहरीको सञ्चारसेट रार्ईले खोसेर बेपत्ता पारेका थिए। त्यसबेला माओवादीकै दबाबमा होटलले रार्ईलार्ई जोगाउँदै ६० हजार रुपैयाँ तिरेको थियो। त्यस्तै रार्ईले होटल हायातका इकाई अध्यक्ष (जो भट्टरार्ई निकट हुन्) मुक्ति दाहाल, अन्ना क्यासिनोकै अर्जुनलाल श्रेष्ठलार्ई ज्यान मार्ने धम्की दिएको उजुरी पनि प्रहरीमा परेको छ।
कसरी जोडे सम्पति?
सामान्य परिवारका रार्ईले कसरी चार करोडभन्दा बढी सम्पति जोर्न सफल भए? कुन–कुन कालो खेलमा उनले हात हालेका थिए? निकै चासोको विषय बनेको छ। त्यही बुझ्नका लागि प्रहरीले उनका अन्य पाटो अनुसन्धान गरिरहेको छ। रार्ईको सम्पति उजागर भएपछि होटलका इकाई अध्यक्षले त त्यति धेरै सम्पति जोहो गरिसकेका रहेछन् भने त्यसभन्दा बढी चलखेल गर्ने माओवादी नेताहरूले कति सम्पति कुम्ल्याएर लुकाएका होलान्? अनुसन्धानको विषय बनेको छ। स्रोतका अनुसार रार्ईको नेतृत्वमा क्यासिनोका बाउन्सरहरूको एउटा समूह नै लुटपाट धन्दामा लागेको थियो। उनीहरूको लुटपाट शैली पनि अचम्मको थियो। क्यासिनोमा कसैले जुवा जितेपछि रार्ईको निर्देशनमा बाउन्सरहरूको एउटा समूह होटलको गेटमा बस्दथ्यो। जुवामा जितेको व्यक्ति निस्कन लागेका बेला गेटमै पैसा लुटिन्थ्यो। जुवामा जितेको पैसा लुटिएको हुनाले लुटिने व्यक्तिले पनि प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्दैनथे। यद्यपि लुटिएको घटनाका एक दर्जन उजुरी दरबारमार्ग प्रहरी प्रभागमा दर्ता भएका छन्।
रार्ईले घर खरिद गरेको कथा पनि निकै रमाइलो छ। स्रोतका अनुसार तीन वर्ष पहिले उनले लामाटारमा जग्गासहितको घर ३६ लाख रूपैयाँमा किन्ने सहमति गरी ३ लाख दिएर बैना गरे। तर डेड वर्षसम्म उनले घर धनीलार्ई बाँकी पैसा दिएनन्। माओवादीले लुकाएको कालो धनकै कारण राजधानीमा दिनदिनै जग्गाको मूल्य आकासिँदै गएपछि थुप्रै ग्राहक त्यो घर खरिद गर्न पुगेर ६८ लाख रुपैयाँसम्म दिने भए। त्यसपछि घरधनीले दुई वर्षसम्म पैसा दिनुभएन, अब बैना फिर्ता लैजानुस्, मैले घर अरुलार्ई नै बेच्ने भएँ भनेका थिए। तर, रार्ईले आफू माओवादी भएकाले पुरानै मूल्यमा घर नदिए जे पनि गर्न सक्ने भन्दै धम्की दिएपछि ३६ लाखमै घरधनी घर छोड्न बाध्य भएका थिए। त्यो घर जग्गाको मूल्य मात्र अहिले तीन करोडभन्दा माथि पुगेको छ। यसबाहेक राजधानीका उद्योगी व्यापारी अपहरण गरेर र टेलिफोनमा धम्क्याएर पनि रार्ईले लाखौं पैसा कुम्ल्याएका उनका सहकर्मीहरूको भनाइ छ। उनलार्ई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोली उनको आलिशान घर देखेर अचम्ममा परेको थियो।
'सर्वहारा वर्गको मुक्तिभन्दा हाम्रो अर्को कुनै स्वार्थ छैन। मृत्यु वा मुक्तिबाहेक निजी सम्पति जोड्न हामी लागिपर्ने छैनौं,' एकीकृत नेकपा माओवादीले युद्धकालमा यसै भनेर हजारौं गरिब जनताका छोरीछोरीहरूलार्ई आफ्नो पछि लगाएको थियो। तर, त्यही पार्टीका नेताहरूको आरामदायी जीवन र सम्पतिको त कुरै छोडौं, छोटे कार्यकर्ताहरू समेतले करोडांै सम्पति जोडेको पाइएपछि विगतको वाचा 'उडायो सपना सबै हुरी'ले भन्ने गीतमा रूपान्तरण भएको छ।